Dood wadaag ku saabsan dib u eegista dastuurka oo Muqdisho lagu qabtay-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Dood wadaag ku saabsan dib u eegista dastuurka oo Muqdisho lagu qabtay-Sawiro
Dood wadaag ku saabsan dib u eegista dastuurka oo Muqdisho lagu qabtay-Sawiro
October 9, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Wasaaradda Dastuurka xukuumada federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan dood wadaag ah oo ku saabsan isla jaanqaadida dib-u-eegista Dastuurka iyo doorashoooyinka.
kulanka waxaa ka soo qeybgalay masuuliyiin ka tirsan Xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Wasiirka Arimaha Dastuurka Mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo kulanka furay ayaa sheegay in Wasaaradda ay dhiiragelineyso in dadweynaha ra’yigooda ay ka dhiibtaan arrimaha masiiriga ah ee quseeya dib-u-eegista Dastuurka.
“Wasaaradda waxay aas-aastay Madasha ka qeybgalka Dadweynaha taasoo marba looga doodo arrimaha taagan ee quseeya dib-u-eegista Dastuurka. Maanta waxaa miiska noo saran isla jaanqaadida dib-u-eegista Dastuurka iyo doorashoooyinka, waxaan soo dhaweyneynaa aragtiyada iyo su’aalaha ay qaabaan dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed” ayuu yiri Wasiirka.
Ka qeybgalayaashii kulanka ayaa soo jeediyeen aragtiyo iyo su’aallo ku saabsanaa dib-u-eegista Dastuurka iyo doorashoooyinka, waxaana su’aalahaas si wadajir ah uga jawaabay Wasiir Cabdi Xoosh, Xildhibaan Fawsiya Xaaji Aadan, La-taliyaha Madaxaweynaha Maxamed Cabdirisaaq iyo La-taliyaha Ra’iisulwasaaraha Avv Cumar Dhageey.
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ayaa sii wadi doonta qabashada kulamada noocan oo kale ah ee dadweynaha ay fikradooda uga dhiibanayaan arrimaha masiiriga ah ee quseeya dib-u-eegista Dastuurka.